५५ जना नेपालीले विदेशमा संकास्पद लगानी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उनीहरुको कानुन विपरित विदेशमा लगानी रहेको पाइएको हो । विदेशमा लगानी गर्न नपाइने कानुन विपरित ५५ नेपालीका लगानी विभिन्न देशमा लगानी रहेको पाइएको हो । यो हेर्नुहोस्ः स्विस बैंक : शंकास्पद धनको नेपाल ‘कनेक्सन’ यो हेर्नुहोस्ः ५५ नेपालीको विदेशमा लगानी : स्विस बैंकमा क-कसको पैसा ? यो हेर्नुहोस्ः प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : नेपाल पैसा भित्र्याउने चक्रको खुलासा यो हेर्नुहोस्ः ‘ट्याक्स हेवन’को नेपाल नाता गैरकानूनी आर्जन नै वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ, कसरी ? गैरकानूनी आर्जन नै…
January 16, 2019 January 17, 2019 TV-Annapurna
२७ माघ २०७१ मा नेपालमा सनसनी भएकोसमाचार हो– ‘स्विस बैंकमा नेपालीको साढे ५ अर्ब’रुपैयाँ । खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे)ले त्यसबेला स्विस बैंकमा पैसा राख्ने त्यस्ता नेपालीको नाम उल्लेख नगरी रकम मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । यो रहस्यमय सम्पत्ति कसको होला भन्ने बारेमा आ–आफ्ना अड्कलबाजीहरू थिए । धेरैलाई ‘राजनीतिक नेतृत्वले लुकाएको अवैध धन’ हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।आईसीआईजेले ‘स्विस लिक्स’, ‘अफसोर लिक्स’, ‘पनामा पेपर्स’ र ‘प्याराडाइज पेपर्स’ मा अध्ययन गरेका करीब दुई करोड ८० लाख कागजातमध्ये नेपाल नाम जोडिएका तीन हजार कागजात हामीले अध्ययन…
खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) को टीमले खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा एक वर्ष लगाएर गरेको खोजको खुलासा हो- नेपाललिक्स २०१९ । यो खोजले अवैध धनको ओसारपसार कसरी भइरहेको छ र यसमा को को छन् भन्ने देखाउँछ । नेपालीको विदेशमा लगानी हाम्रो प्रमुख खोज हो । कानूनतः गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने भए पनि कर प्रणाली र सुशासनका दृष्टिले कमजोर मानिने ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस् जस्ता मुलुकमा कम्पनी खोल्ने र त्यहाँबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउनेहरूलाई पनि हामीले खोजको दायरामा राखेका छौं । तर, कर…
भन्सार विभागले गत सातादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेशबाट आउने यात्रुहरूले ल्याउने सामानमा कडाइ गरेसँगै सबैभन्दा धेरै मदिरा जफत गरिएको जनाएको छ। भन्सार छुटभन्दा बढी परिमाणमा ल्याएर जफत गरिएका मदिरा लगायतका अन्य सामानलाई समितिले मूल्याङ्कन गरेपछि लिलाम बिक्री गरिने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विमानबाट नेपाल आउने यात्रुले कानुन विपरीत ल्याएको सुन पनि जफत गरिएको छ। सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका मालवस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा भन्सार महसुल छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार निजी गुण्टा, झिटि, भारी सम्बन्धी…
अर्थ / वाणिज्य, साताका लोकप्रिय समाचारLeaveacomment
काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुरु गरेको ‘पिक एण्ड ड्रप’ कार्यक्रमप्रति यात्रुको गुनासो छ । यही पुस १ गतेदेखि शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमले ट्राफिक जाम कम भएको कामपाले जनाए पनि यात्रुलाई चढ्न र ओर्लन असहज भएकाले उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । पहिलो चरणमा टुँडिखेल आसपास, भद्रकाली, रत्नपार्क, शहीदगेटलगायत स्थानमा शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा यात्रुलाई जानकारी नै नगराइ शुरु गरिएकाले पनि अन्योल छाएको हो । बालाजुबाट भद्रकालीस्थित एक कार्यालयमा काम गर्न आउने सीता शर्माले भनिन्, “नियमित भद्रकाली झरेर कार्यालय आउँदा निकै सहज भएको र अहिले आरएनएसी कि जमलबाटै आउनुपरेकाले समस्या समस्या भएको छ ।”…
बुधवार ! मालपोत कार्यालय कलङ्की ! कार्यालयको गेटमा पुग्ने बित्तिकै । हेलो ! के कामको लागि हो ? आउनुस्, म मिलाएर गराइदिन्छु । दुई जनाले रिर्पाेटिङका लागि पुगेका टिभी अन्नपूर्णको टिमलाई भने । गेटबाटै मालपोतमा सिन्डिकेट । त्यहीबाट सुरु हुन्छ सेवाग्राही ठग्ने क्रम । कानुन व्यवसायी र कर्मचारीको सिन्डिकेट । त्यही भेटिए एक सेवाग्राही । सहकारीबाट ऋण लिनको लागि जग्गा रोक्का गर्न गएका । अघि म मिलाइदिन्छु भन्ने पनि त्यही थिए । सेवाग्राहीले आठ लाख ऋण लिनु पर्ने भन्न नपाउँदै उनले भने । मालपोतमा काम गर्न गाह्रो छ । उनले…
December 17, 2018 December 18, 2018 TV-Annapurna
सल्यानका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल राज ढकालले सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई सरकारी प्रयोजनका लागी उपलब्ध गराएको साईरन जडित रा १ झ १५४ नम्बरको गाडी काठमाण्डौमा विवाहको जन्ती बोक्दै गर्दा समातीएपछि यस्तो खुलासा भएको हो । गएको शनिवार उक्त गाडीमा सिडियोका चालक सहित आठ जना जन्ती फर्कँदै गरेको अवस्थामा काठमाण्डौमा समातिएको थियो । जन्ती बोकेर साईरन सहितको गाडी बालाजुबाट गंगबुतर्फ हुईकिदैं गर्दा ट्राफिक प्रहरीले अन्य सवारी रोकी बाटो खाली गर्दै थिए । तर सिडियो चढ्नका लागी उपलब्ध गाडीमा सिडियो नभई बिहेका जन्तीले…